Moya China 2019 Amazon Hot Thengisa yasekhaya Plastic Humane Live Catch Smart Mouse Rat Trap Mouse Trap Cage umzi-mveliso kunye nabavelisi |Jinjiang
Inombolo yoMfanekiso: i-WK-mouse cage
Uphawu: Iyalahlwa, iZinzile, iZinzo
Ubungakanani bePhepha: 170 * 61.5 * 64mm
Ubunzima obuninzi: ≤0.5Kg
Indawo yemvelaphi: eTshayinaIgama leBrand: OEM
Uhlobo lwezinambuzane: Iimbovane, amalulwane, iincukuthu zebhedi, iinyosi, ooqongqothwane, iintaka, iicentipedes, amaphela, iiqakamba, iindlebe, iintakumba, iimpukane, iimpondo, iimpuku, iingcongconi, amanundu, iibugs zepilisi, oonomadudwane, iSilverfish, iinyoka, izigcawu, iintubi, amatikiti , iBorer
Indawo eSebenzayo:600-800 ㎡
Umthombo wamandla:Akukho nanye
Igama lemveliso:Rat Glue Trap
Umba:Imigibe yeRat Cage
IiYunithi eziThengisayo:Into enye
Ubungakanani bepakethe enye:19X8X14 cm
Ubunzima obunye:0.450 kg
Uhlobo Lwepakethe:Ibhokisi yesipho, ibhokisi yeKhathoni
Ubuninzi (Amaqhekeza) 1 - 10000 >10000
Est.Ixesha (iintsuku) 5 Kuya kuthethathethwana
i-smart mouse trap
ukupakisha okungathathi hlangothi
1 pack okanye 2 pack
Q1.Ndingayifumana iodolo engumzekelo?
A: Iisampulu idinga iintsuku ezi-1-2, ixesha lokuvelisa ubuninzi lidinga iiveki ezi-1 zobuninzi be-odolo ngaphezu kwe-2000sets.Emva koko sifuna iintsuku ezi-2-4 ukuhambisa iimpahla ukusuka eGuangzhou ukuya eShanghai/Shenzhen/ kwamanye amazibuko.
Q3.Ingaba unawo nawuphi na umda we-MOQ?
A: I-MOQ ephantsi, i-1pc yokujonga isampuli iyafumaneka.
Q4.Uzithumela njani iimpahla kwaye kuthatha ixesha elingakanani ukufika?
A: I-odolo encinci ngokuqhelekileyo siyithumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx okanye i-TNT.Ngokuqhelekileyo kuthatha iintsuku ezi-4-7 ukufika.Ukuhanjiswa kweenqwelomoya kunye nolwandle nako ozikhethelayo.
Q5.Uqhuba njani umyalelo ?
A: Okokuqala, sixelele iimfuno zakho okanye isicelo sakho.Okwesibini, sicaphula ngokweemfuno zakho okanye iingcebiso zethu.Okwesithathu, umthengi uqinisekisa iisampulu kunye nediphozithi yokubeka iodolo esemthethweni.Okwesine, silungiselela imveliso.
Q6.Ngaba ungayenza ilogo elungiselelweyo kunye nokupakishwa?
A: Ewe, sinokwenza i-OEM ngelogo, ukupakishwa, umbala.Umgaqo-nkqubo waBucala Siyinkampani eyenza izinto kwaye siyabahlonipha abathengi bethu kunye nemfihlo yabo, yiyo loo nto lonke ulwazi esilufumana kubathengi bethu lugcinwa luyimfihlo kwaye alunikwanga mntu wesithathu.Sicela ulwazi oluthile kubathengi bethu ukuba baqhube iiodolo zethu kwaye basincede sibanike izibonelelo ezikhethekileyo, iileta zeendaba kunye neNkonzo yabaThengi engcono.
Ngaphambili: Uyilo lweFashoni olutsha lwe-Sonic Rat Repellent-2019 iAmazon eshushu iThengisa iPlasitiki yePlastiki ephilayo Live Bamba i-Smart Mouse Rat Trap Mouse Trap Cage-Jinjiang
Okulandelayo: Ngo-2020 ukubamba ngokukhawuleza iBait Hamster Mouse Trap Ayinatyhefu ABS yePlastiki eSmart Mouse Trap Cage Isilwanyana esiPhila kwiCage Mouse Trap Humane
I-Rat Control Trap